Saxanka anode Graphite
Saxanka anode garaafka, foostada anode, usha garaafka garaafka (oo sidoo kale loo yaqaan saxanka anode garaafka, garaafka anode ee loo yaqaan 'graphite anode rod') waxay leeyihiin astaamo aad u fiican: caabbinta heerkulka sare, habdhaqanka wanaagsan iyo kuleylka, farsamaynta fudud, xasiloonida kiimikada wanaagsan, aashitada iyo u adkaysiga daxalka alkali, ash ash. Shayga waxaa loo isticmaalaa korantada xalka aqueous, diyaarinta koloriin, soodhaha caustic, xalka milixda ee elektaroonigga lagu diyaariyo alkali, ama electroplating xambaarayaasha biraha iyo kuwa aan birta ahayn, tusaale ahaan, saxanka anode graphite waxaa loo isticmaali karaa anode tabinta ee cusbo kuleylka xalka si loo diyaariyo soodhaha caustic. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa daaweynta bullaacadaha ee warshadaha kiimikada, elektiroonigga iyo dharka. Qolka elektroolka ah, tiirka halka uu hadda ka socdo oo dhanka kale uga socda korantada waxaa lagu magacaabaa anode. Warshadaha korantada, anode guud ahaan waxaa loo sameeyaa qaab saxan, marka waxaa loogu yeeraa saxanka anode。 Astaamaha astaamaha anode ee elektrolysis-ka:
Kuleyliyaha Graphite waa nooc ka mid ah jirka kululaynta foornada kuleylka leh. Heerkulka badeecada si dhakhso leh ayaa loo kicin karaa iyada oo la adeegsanayo